“ရွှေမြန်မာ”: တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ရေချမ်းစင်
စန္ဒကူး said... @ 23 April 2010 at 10:55
ကျွန်မလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းတွေကို မြန်မာပြည်မှာ ရေအလကားသောက်လို့ရတယ်ပြောတော့ သူတို့ကအံ့သြကြတယ်။
ရေချမ်းစင်လေးတွေရဲ့ပုံကိုသူတို့မြင်သာအောင်ပြောပြရတယ်။ တစ်ချို့နေရာတွေများဆို အထဲကရေ က ရေကြက်အေးလား၊ ရေစိမ်းလာမသိ... စပါးစေ့လေးတွေ ရေအိုးအောက်နားပတ်ပတ်လည်မှာကျဲထားတော့ စပါးပင်စိမ်းစိမ်းလေးတွေကြားက ရေအိုးလေးထဲက ရေ အေးမြနေတာ..ပင်ပန်းမောဟိုက်လာတဲ့အခါ တစ်ခွက်လောက်သောက်လိုက်ရ ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူး ဆိုတာတွေရောပေါ့။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ဓာတ်ပုံရိုက် ဖြစ်အောင်ရိုက်လာခဲ့အုံးမယ်။ ရေအလှူလုပ်ပေးထားတဲ့သူတွေရော ရေချမ်းစင်လေးတွေဖြတ်သွားတိုင်းအမြဲဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးမိတယ်။း)
ဇော်သိင်္ခ said... @ 28 April 2010 at 10:49
မယမင်း ရေ.. ရေချမ်းစဉ်လေး အကြောင်းဖတ်လိုက်ရတာ နဲ့ ရင်ထဲ ကိုအေးမြသွားတာပဲဗျာ.. ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာ အခုလို ပူအိုက်တဲ့ ရာသီမှာ.. လမ်းဘေး အများစုမှာ..အဲဒီလို သန့်ရှင်းအေးမြတဲ့ ရေချမ်းစဉ်လေးတွေ များများ လုပ်ပေးထားနိုင်ကြရင် ပိုပြီး ကောင်းမယ်နော်.. .. အခုလို ရေချမ်းစဉ်လေး အကြောင်းရေးပေးသော မယမင်း နှင့် တကွ. ရေချမ်းစဉ်လေး.. ကို တည်ဆောက်ကုသိုလ် ယူသွားသော ကုသိုလ် ရှင်ကိုလည်း... သာဓု ခေါ်ပါတယ်ဗျာ. ရေအကျိုးက မတောင်းပဲ တောင် ပြည့်တယ်ဆိုတော့.... ဘာမှတော့ ဆုတောင်းပေးစရာ မလိုတော့ဘူးနော်...